Tsy fiofanana sy fifandraisana ara-barotra araky ny niheverany azy ny seminera (Séminaire de haut niveau sur les Responsables des Gouvernements locaux) nanasan’ny governemanta Sinoa, fa seminera miompana betsaka amin’ny fampahafantarana ny Chine, indrindra ny fahombiazany ary ny tanjany ara-toekarena. Efa amam-bolana no nanomanan-dry zareo Sinoa ity Seminera ity ary saika mpampianatra amin’ny oniversite no manao famelabelarana nefa ry Ragova fiaraha-miasa sy fisintonana Sinoa mpandraharaha ho avy hampiasa vola amin’ny Faritra sahanin’izy ireo avy no niomanana.
Herinandro taorian’ny latsa-bato tamin’ny fifidianana Ben’ny tanàna sy Mpanolontsain’ny tanàna natao ny 27 novambra 2019, dia nanao fanambarana tao amin’ny pejiny Facebook i Feno Harison milaza fa « Ny fampitahana ny lisi-pifidianana no ahitana ny fahamarinana ». Kandida tsy miankina tamin’ny fifidianana Ben’ny tanàna teto Antananarivo Renivohitra i Feno Harison. Niisa dimy ireo kandida teto an-drenivohitra.
Nanomboka ny alakamisy 28 novambra 2019 ny fotoana fametrahana fitoriana mikasika ny tsy fanarahan-dalàna tamin’ny fampielezankevitra momba ny fifidianana Ben’ny tanàna sy Mpanolontsain’ny tanàna, sy ny tamin’ny andron’ny latsa-bato ny alarobia 27 novambra 2019. Manerana an'i Madagasikara, 32 ireo fitoriana sy fitarainana voarain'ny CENI (24 mikasika ny fifidianana Ben'ny tanàna, 8 mikasika ny fifidianana Mpanolotsaina). Miisa 14 kosa ireo fitoriana voarain'ny Fitsarana Misahana ny ady amin'ny fanjakana manerana ny nosy hatreto, ka ny 10 amin'ireo dia teto Antananarivo. Raisin'ny CENI hatramin’ny fotoana amoahany ny voka-pifidianana vonjimaika izay rehetra fitarainana sy fitoriana mbola ho avy, ary hatolony ny Fitsarana mahefa hitsara izany.
La confrontation de liste électorale émargée lors des législatives du 27 mai 2019 avec celle émargée lors des municipales du 27 novembre 2019 doit permettre de dégager une vérité générale et faire taire la polémique autour de cette élection communale, si effectivement la liste n'a pas été changée. (Voir Suite Photos)
Tonga nitsidika ara-pomba fifanajana ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao, tao amin’ny Lapa maitso Anosikely, ny Ambasadaoron’ny Afrika Atsimo, Ramatoa Vuyelwa Maud Dolmo ny alatsinainy 02 desambra 2019. Fitsidihana sady fanaovam-beloma satria tapitra ny fepotoam-piasan’ity Ambasadaoron’i Afrika Atsimo ity rehefa niasa sy nonina teto Madagasikara nandritra ny efatra taona mahery izy. Nisaotra ny Filohan’ny Antenimierandoholona izy tamin’ny fiaraha-miasa izay nisy teo amin’ny roa tonta nandritra ny fotoana nijanonany teto Madagasikara. Nambarany fa lehibe tokoa ny ezaka izay nataon’ny fitondram-panjakana malagasy matoa tafita tamin’ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika sy ara-dalàna toy izao, manamarina izany ireny fifidianana nifanesy ireny.
Randriatahinamalala Livasoa Moratiavina no nahazo isam-bato ambony indrindra teto amin’ny Kaominina ambonivohitr’i Betafo, Faritra Vakinankaratra tamin’ny fifidianana Ben’ny tanàna natao ny 27 novambra 2019 iny, raha ny vokatra vonjimaika navoakan’ny CENI. Sivy ny kandida Ben’ny tanàna teto Betafo. Kandida tsimiankina « Firaisankina Betafo » ary notohanan’ny antoko Tia Tanindrazana i Livasoa, izay tanora manampahaizana sady mpandraharaha diso fantatra eto an-toerana amin’ny asa soa nataony, ka anisany nifidianan’ny olona azy ary nitondra ho amin'izao fandreseny izao. « Miarahaba manokana an'i Livasoa N07 nivoaka mpandresy ny tenako, eny na dia tsy mbola ofisialy aza », hoy i Andriamizaka Lova, isany nifaninana tamin’i Livasoa. « Manaiky ho resy aho », hoy ity kandidan’ny Antoko MMM eto Betafo ity, tamin’ny fanambarana natao tamin’ny tambazotra serasera sosialy facebook.
Nolanian’ny solombavam-bahoaka nivory tao amin’ny Lapan’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza harivan’ny sabotsy 30 novambra 2019 ny Volavolan-dalàna laharana faha-005/2019 tamin’ny 30 oktobra 2019 momba ny Lalàna mifehy ny Fitantanam-bolam-panjakana ho amin’ny taona 2020. Vinavinaina ho 5,5% ny fitombon’ny harin-karena, ary 6,2% ny fisondrotry ny vidim-piainana amin’ny taona 2020. Vinavinaina ho 11,5%, ny taham-pampidiran-ketra.
Isan-taona, ny 1 desambra hatramin'ny 15 mey no fotoana voatondron'ny lalàna hanavaozana ny lisi-pifidianana. Androany 1 desambra no manomboka misokatra ho an'ny olompirenena ny lisi-pifidianana isam-pokontany. Ny 1 desambra 2019 hatramin'ny 15 febroary 2020 no fepotoana ahazoana misoratra anarana ao anaty lisi-pifidianana eny anivon'ny Fokontany. Amin’ny 28 febroary 2020, ny famaranana vonjimaika ny lisi-pifidianana. Aorian'izay dia miakatra eny amin'ny "Centre informatique de District" (CID) ireo boky firaketana ny fanavaozana isam-pokontany, arakitra ara-kajimirindra, ary atonta vonjimaika ny lisi-pifidianana.
Nahazo tatitra ny CENI fa nisy ny famenoana mialoha ny vata mangarahara nataon’ireo mpikambana miisa 5 tao amin’ny birao fandatsaham-bato tao amin’ny Biraom-pifidianana iray ao amin’ny Fokontany Antsirabe, Kaominina Andranomavo, Distrikan’i Soalala. Tra-tehaky ny mpifidy io hosoka io. Karohin’ny Zandarimariam-pirenena ireo mpikambana miisa 5 nahavaonon-doza ireo amin’izao. Tsy afaka nanohy nanatontosa latsa-bato tao amin’io Biraom-pifidianana io. Tao amin’ny Fokontany Taperipia, Kaominina Tsaraiko, Distrikan’i Betroka indray dia nisy ny fifandisoan’ny bileta tokana tamin’ireo tokony ho any amin’ny Kaomininina Beapombo II. Nisy ny fepetra noraisina nanolo izany tamin’ireo bileta tokana fiandry saingy tsy misy ny vaovao momba ny fizotry ny latsabato tany an-toerana, tsy mbola tonga eny amin’ny SRMV ny vokatra. Ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana no manapa-kevitra mikasika izay ho tohin’ny fifidianana tao amin’ireo Kaominina roa ireo.